Human Rights oo war ka soo saartay dhibaatada DFS ay ku hayso Suxufiyiinta soomaaliyed - Awdinle Online
Human Rights oo war ka soo saartay dhibaatada DFS ay ku hayso Suxufiyiinta soomaaliyed
May 2, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Soomaaliya ayaa laba jibaartay hanjabaadooda ku aaddan suxufiyiinta xilli dalku wajahayo tiro sii kordheysa oo kiisaska Covid-19 ah, sida lagu sheegay warbixin kasoo baxay hay’adda udoooda ilaalinta xuquuqda Aadanaha ee Human Rights watch.
Tan iyo badhtamihii Abril 2020 oo kali ah, ayay mas’uuliyiintu si aan kala sooc lahayn u xireen saddex weriye, waxa ay ku eedeeyeen laba dambi oo kaladuwan, waxayna ka mamnuuceen xarun raadiye maxalli ah in ay wax ku baahiso lahjadeeda maxalliga ah ayaa lagu yiri warbixinta.
Laga soo bilaabo Abriil 30, Soomaaliya waxa ay xaqiijisay 601 kiis oo ah “Covid-19″ iyo 28 dhimasho ah. Dalka waxaa sidoo kale loo qorsheeyay in la qabto doorashooyinka guud dabayaaqada 2020 ama horraanta 2021, laga yaabee in ay tahay doorashadii ugu horreysay ee waddanku yeesho muddo 50 sano ah.
Laetitia Bader, oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa yiri ” Saxaafad madax banaan oo laga ilaaliyo xadgudubka ayaa fure u ah in la hubiyo in Soomaalidu ay heystaan macluumaad ay ku gaaraan go’aanno xog-ogaal ah inta lagu jiro masiibada”.
2-dii Abriil, Hay’adda Sirdoonka iyo Amniga Qaranka (NISA) ayaa bartooda Twitter-ka ku soo qortay in ay baarayaan Harun Maruf oo ka tirsan VOA, oo ah suxufi caan ah oo Mareykan ah, oo lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa falal ka baxsan xeerka anshaxa saxaafadda.
Human Rights Watch waxa ay warqad u qortay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud bishii Abriil 28 iyagoo weydiisanaya faahfaahinta xaaladda baaritaannada lagu sameeyay Cabdicasiis, Harun, iyo Maxamed Abuja laakiin jawaab kama helin.
Previous articleShaqaale ka tirsan Xafiiska Midowga Yurub ee Somalia oo laga helay Coronavirus
Next article“Iskaashiga Maamullada iyo DFS waa xiligii loo baahnaa waqtigan” Faysal Rooble